Herintaona hafa, dingana iray hafa, traikefa nahafinaritra hafa… Izany no YII2019 ho ahy! - Geofumadas
Rehefa nilazana aho fa hanana fotoana hafa hiditra ao amin'ny hetsika lehibe indrindra amin'ny fotodrafitrasa amin'ity taona ity, dia niantsoantso tamim-pifaliana aho. YII2018 any London, ankoatry ny iray amin'ireo toerana fialantsasatra tiako indrindra, dia traikefa nahafinaritra tamin'ny resadresaka nifanaovana tamin'ny tompon'andraikitra ambony avy ao amin'ny Bentley Systems, Topcon sy ny hafa, lahateny mavitrika ary ireo fivoriana be mpahalala. Bentley Systems dia namelona indray ny foto-kevitry ny "kambana nomerika" sy ny fomba tsara kokoa hijerena ny revolisiona amin'ny indostrian'ny fananganana noho ny miaraka amin'ireo mpanao trano. Ireo fotodrafitrasa tao meka dia nampivondrona ireo mpitarika eritreritra saika ny indostria rehetra ary ny fizarana fahalalana, tambajotra ary fiaraha-miasa nitranga dia tsy hay lazaina.
Teo amin'ny toerana mety aho mba handrehitra ny fitiavako hanoratra momba ny indostrian'ny fananganana. Avy amin'ny Akademia Fampandrosoana nomerika hampiasa tranga dia te hisambotra ny zava-drehetra ao an-tsaiko aho ary avy eo hamadika azy ho tantara tsy manam-paharoa. Feno fahalalana, niverina indray, afaka namorona lahatsoratra mahaliana ho an'ny mpamaky ahy aho. Ny faniriana hihaona amin'ny stalwarts an'ny indostrian'ny fananganana amin'ny taona ho avy dia velona ary salama kokoa, indrindra fa satria akaikin'ny trano fonenany i Singapore. Amin'ny ora 5 sy 55 minitra monja amin'ny sidina dia tsy azoko atao!
Tonga ny 20 Oktobra 2019 ary tao amin'ny Marina BaySands, Singapore iray mahafinaritra aho. Rehefa nandinika ny faritry ny pisinin'izy ireo ao amin'ny Rooftop Infinity aho dia nitombo ny hafanam-poko. Izy io dia mahavariana maritrano irery, toy ny tanàna kely misy toeram-pivarotana, foibe fampirantiana, trano fandihizana, trano filokana, kianja fisakafoanana ary inona koa ...
Ny andro nandrasana YII2019 andro maharitra dia nanomboka tamin'ny maraina mahafinaritra tamin'ny 21 Oktobra. Ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety dia nanambara vaovao manan-danja toy izao:
Ny Bentley Systems sy ny Topcon Positioning Systems dia manangana ny fiaraha-miasa amin'ny fananganana nomerika.
Bentley Systems dia manamafy ny fanomezana Digital Cities amin'ny fahazoana ny Citilabs sy ny teknolojia orbitatiora geospatial.
Digital Construction Work dia manambara ny vondron'olona mpiara-miasa aminy sy ny fiaraha-miasa amin'ny O3 Solutions mba hanohanana ny serivisy fanaingoana asa.
Geofumadas dia nanatrika an'ity hetsika ity nandritra ny 11 taona nisesy, raha ny amiko dia fanindroany io ary voalohany amin'ny ampahany amin'ny gazety TwinGeo / Geofumadas. Ny resadresaka nifanaovana tamina tompon'andraikitra ambony tao amin'ny Bentley Systems dia traikefa nahafaly izay nanitatra ny fahalalako momba ny kambana nomerika, ny injeniera ara-teknika, ny injenieran'ny rafitra, ny tanàna nomerika ary maro hafa ...
Ny tamba-jotra, fifandraisana amin'ny namana taloha sy vaovao mandritra ny fisakafoanana sy ny fiatoana dite dia mahafaly ny fotoana rehetra; Nentiko ara-bakiteny ny fototry ny andro tao anaty bitsika iray nanjary malaza be.
Eto aho ary mankafy ny fivoarana isa-minitra..y taona faharoa dia traikefa mahaliana ihany ☺️ #YII2019 @BentleySystems @GolgiAlvarez @christinebyrne pic.twitter.com/dNfIUrn82K
- SHIMONTI PAUL (@shimontipaul) Oktobra 21, 2019
Nifarana tamin'ny andro lasa izay ny fiaraha-misakafo mahafinaritra izay nokarakaraina tao amin'ny Clifford Pier mahafinaritra tao amin'ny Hoterton Bay Hotel.
Ny andro manaraka, 22, 23 ary 24 Oktobra tamin'ny alàlan'ny fivoriana ACCELERATE mahaliana, fampahalalana momba ny indostria, dia nanampy ahy handinika ny tontolon'ny Twins Digital. Miketrika foana amin'ny fahafantarana ny fomba ampiharana ny zava-misy ary ny fanovana ny fiovana eo amin'ny tontolo tena izy, ny tranga fampiasana ary ny famelabelarana famaranana dia nahatonga ahy hifikitra. Mila miresaka manokana ny alina YII-Awards miaraka amin'ny glamor sy ny tsikiny.
Ny fanambarana lehibe indrindra tamin'ny hetsika dia:
Bentley Systems dia mampiditra ny serivisy AssinWise Digital Twin Services sy OpenUtilities Digital Twin Services ho an'ny fananana sy ny fampiasa amin'ny tambajotra.
Ny kilasin'ny anao manokana dia manambara ny fisian'ny fandaharam-pianarana ao amin'ny sekoly miaraka amin'ny Bentley Systems.
Manatevin-daharana amin'ny maha mpikambana mpikambana ao amin'ny multinational ny Bentley Systems - manambara ny fanohanan'ny IFC amin'ny zaza kambana nomerika.
Bentley Systems dia nanambara ny serivisy rahona iTwin vaovao ho an'ny kambana matihanina dizitaly.
By Shimonti Paul, Mpanolotsaina momba ny hevitra, TwinGeo
Previous Post«Previous Serivisy rahona iTwin vaovao ho an'ny Engineering Engineering Twins Infrastructure
Next Post Gazety Geo-Engineering & TwinGeo - Fanontana faharoamanaraka »